မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Shandong Kingoro Machinery Co. , Ltd.
ဖြေ။ ။ သင့်ကိုအချိန်အတိအကျမပေးနိုင်ပေမယ့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာရောင်းတဲ့အတောင့်စက်တချို့ဟာအခုထိကောင်းမွန်နေဆဲပါ။
A: လက်စွပ်သေဆုံး: 800-1000 နာရီ။ ဒီ roller: 800-1000 နာရီ။ roller shell ကို: 400-500 နာရီ။
လက်စွပ်သေဆုံးသည့်အလွှာသည်အလွှာ ၂ ခုရှိသည်။ တစ်ခုသောအလွှာတစ်ခုပျက်စီးသွားသည့်အခါအခြားအလွှာကိုအသုံးပြုရန်၎င်းကိုလွှဲပြောင်းလိုက်သည်။
ဘယ်ဟာ SZLH560 စီးရီးနှင့် SZLH580 စီးရီးနှင့်ပတ်သက်။ သာ။ ကောင်း၏?
ဖြေ။ ။ အရည်အသွေးနှစ်ခုလုံးအာမခံပါတယ်။ အချို့ဖောက်သည်များသည်ဤအမျိုးအစားကိုနှစ်သက်ကြပြီးအချို့သောဖောက်သည်များကမူအခြားအမျိုးအစားကိုနှစ်သက်ကြသည်။
အကယ်၍ ကုန်ကျစရိတ်ကိုစဉ်းစားပါက SZLH560 စီးရီးများသည်အတော်လေးသက်သာသည်။ သို့သော် SZLH580 သည် ပို၍ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီးသက်တမ်းပိုရှည်ပြီးစျေးကြီးသည်။
A: ဟုတ်တယ်။ သစ်သား sawdsut ဇီဝလောင်စာလုံးလေးများအတွက်အသုံးအများဆုံး materia ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ အခြားအရွယ်အစားရှိသောသစ်သားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို၎င်းသည် ၇ မီလီမီတာထက်သေးငယ်သည့်အပိုင်းအစများအဖြစ်ကြေကွဲရမည်။ ထိုအခါအစိုဓာတ်ပါဝင်မှု 10-15% ဖြစ်ပါတယ်
ဖြေ။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုစိတ်မပူပါနဲ့။ ကျွန်တော်တို့မှာ ၀ ယ်ယူထားတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကောင်းပါတယ် ၂ နာရီအတွင်းအီးမေးလ်၊ ဖုန်း၊ ဗီဒီယိုလမ်းညွှန်သို့မဟုတ်လိုအပ်ပါကနိုင်ငံခြားအင်ဂျင်နီယာများမှတုန့်ပြန်မှုကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။
A: စက်တွေအားလုံးမှာတစ်နှစ်အာမခံရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ကားအပိုတွေမပါဘူး။
ငါ pellet စက်ကိုသာပေမယ့်အခြားအထောက်အကူပြုပစ္စည်းကိရိယာများရှိမရှိနိုင်သလား?
A: အကယ်၍ အလွန်သေးငယ်သော pellet machine ဖြစ်ပါကဟုတ်ပါသည်၊ pellet machine သည်သာအဆင်ပြေပါသည်။
သို့သော်ကြီးမားသောစွမ်းရည်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်စက်၏လည်ပတ်မှုကိုထိရောက်စွာသေချာစေရန်သင်ပစ္စည်းတစ်ခုလုံးကို ၀ ယ်ပါ
အဖြေ။ ။ အင်ဂျင်နီယာများကသင့်အတွက်စက်ကိုတပ်ဆင်သောအခါသူတို့သည်သင်၏လုပ်သားများကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏တပ်ဆင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်မလိုအပ်ပါကသင်၏လုပ်သားကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့မီးရထားဖြင့်ပို့နိုင်သည်။ သင့်တွင်ကူညီရန်ရှင်းလင်းသောဗီဒီယိုများနှင့်အသုံးပြုသူလက်စွဲလည်းရှိသည်။
A: ဂီယာအုံအတွက် L-CKC220 နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသောပေါင်းစပ် lithium base grease ။
ပထမ ဦး စွာစက်အသစ်အတွက်၎င်းတွင်ဆီမရှိပါ၊ သင်လက်စွဲအတိုင်းအောက်ပါစုပ်စက်အတွက်လိုအပ်သောဆီနှင့်အမဲဆီထည့်ရမည်။
သစ်သားအတွက်ကြိတ်စက်, Wood Crusher, ခါးပတ် Hammer စက် Driven, ဆိုင်ကလုန်းနှင့်အတူတူစက်, တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်စက်, ဥယျာဉ်သစ်သားထင်း,